Uncategorized Archive - လည်ပတ်ဖန်ထည်ဖြစ်စဉ်, ဖန်ထည်လျှောတံခါး, Framed Shower Room Supply Manufacturing Plant
နက်ရှိုင်းစွာထုတ်ယူခြင်း Tempered Glass ကို
ပိုးပုံနှိပ် Tempered Glass ကို
Tempered Patterned Glass ကို
ပွင့်လင်းဖန်ခွက် Swinging တံခါး
Pattern Tempered Glass ကို
GS-6013 နှစ်ဆသောလျှော Semi-Frameless ကြည်လင်သောဖန်ရေပန်းရေချိုးခန်း
GS-6077 စတုဂံပုံမဏ္otိုင်တွင်ရေ ၀ င်ပေါက်ပါ ၀ င်သည်
ကြယ် ၅ ပွင့်ဟိုတယ်များအတွက် GH1208 ဇိမ်ခံအိမ်ခန်း
151L ကို Tempered Glass Shower Room
GS-6084 Tempered Glass Swing တံခါး
Frameless shower doors can be customized Frameless shower doors are becomingapopular choice among contractors and homeowners alike. အချည်းနှီးပုံစံများအများစုသည်ထုံးစံဖန်ခွက်အိမ်တံခါးများဖြစ်သည်, ဆိုလိုတာကတော့သင်ဟာပုံမှန်တံခါးအရွယ်မှာရေချိုးခန်းတံခါးကိုမထုတ်လုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာပါပဲ. ဒါကသင့်ရဲ့ရေချိုးခန်းတပ်ဆင်ရန်ပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်စေသည်. တကယ်တော့, စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ခြင်းသည်ဘောင်မဲ့ရေချိုးခန်းတံခါးကို ၀ ယ်ယူရာတွင်အရေးကြီးသောအချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်. Frameless… Read more »
အဘယ်ကြောင့်တစ် ဦး Tempered ဖန်တံခါးကိုရွေးချယ်ပါ?
မူပိုင်ခွင့်© 2021 Foshan GangHuaSheng မှ Tempered Glass Co. မှထုတ်ဝေသည်။, Ltd.